Khetha umqashi owayezolubonisa isimongqondo esinobuqotho abangaphansi kwakhe, akulula njengoba kubonakala. Ngezinye izikhathi siba isikhathi eside ukufunda izibuyekezo eziningi mayelana inkampani ethile. Futhi ngokuvumelana ukuba unqume ukuthi ukufuna umsebenzi i-corporation. Landelayo kuzodingeka ukuba baqonde lokho inkampani ebizwa ngokuthi "Peshkariki". Izibuyekezo izicelo nabasebenzi kuzokusiza uqonde ukuthi umsebenzi enhlanganweni wanelisa abasebenzi, yiziphi izinzuzo nezingozi bebona. Ngakho yini okumelwe siyibheke kwasekuqaleni? "Peshkariki" - lena umqashi seqiniso noma cha?
"Peshkariki" - yinkampani waziphatha Logistics namasevisi zokuthutha. Ngaphezu kwakho konke, kuba ukuhlinzekwa kwezidingo. Futhi kuziwa Courier amasevisi. Kakhulu Ukugunda uma udinga ukuletha umkhiqizo othize, ikhasimende ingakwazi "Peshkarikami".
Ngokuvamile, lokhu inkampani - a itoho ithuba nganoma isiphi isikhathi ngaphandle kwezinkinga. Ngakho-ke, inani labantu unesithakazelo enhlanganweni. Kungakhathaliseki noma cha ungathola imali ezinhle? Yiziphi izinzuzo nezingozi ukusiza ukwahlulela ubuqotho corporation? Qonda yonke le akunzima kangako.
"Peshkariki" uhlobo izimpendulo emihle etholakale ngoba ukusakazeka kwalo. Hhayi ngaso sonke isikhathi, kodwa ngokuvamile. Into wukuthi lokhu inkampani isebenza kuphela emizini ukubaluleka federal eRussia. Ngaphezu kwakho konke, eMoscow Petersburg. Ngamanye izifunda zezwe "Peshkariki" ayinikezi amasevisi abo. Futhi umsebenzi, futhi.
Abanye bathi "Peshkariki" - kungcono lamasela. Phela, inkampani inikeza ehambisa itoho. Kodwa futhi umsebenzi unomphela, futhi, zingahlelwa. Ngaphezu kwalokho, inhlangano isebenza kuphela emadolobheni ambalwa yezwe. Ingxenye izicelo bakubheka njengodumo noma impikiswano evumelekile ebugebengwini.
Eqinisweni, "Peshkariki" - Lena nkampani ekhona, akukho ukukhwabanisa. I eqinile ine ngisho ngabanye izinto ukulethwa izimpahla. Ngakho-ke, la macala nokho okungenani, ubufakazi balokho.
Isiphi isithembiso isicelo
Futhi lokho inkampani uthembisa bonke abasebenzi? Bobabili ngesikhathi umsebenzi eziyisisekelo, futhi lapho podrabotke? Lena iphuzu elibalulekile ukuthi izithakazelo ezinye ukhetho. Kule ndawo, "Peshkariki" Izibuyekezo ikakhulukazi omuhle wathola. Kungani?
Le nkampani inikeza:
elula, uhlelo nezimo;
Amaholo okusezingeni eliphezulu;
kungenzeka itoho nganoma yisiphi isikhathi;
ukuhlanganisa ezifundweni zabo.
Kodwa ingabe kulungile, ngempela? Njengoba sekushiwo, abanye usola inkampani lokukhwabanisa. Ingabe le njongo kunamabanga azwakalako yangempela? Ngemva ukusabalala emadolobheni ambalwa nje, akuyona ubufakazi.
"Peshkariki" Izibuyekezo amakhuriya uthola ahlukahlukene. Kukhona okuhle phakathi kwabo, hhayi kakhulu. Kunoma ikuphi, abaningi singabaze ubuqotho inkampani ngenxa izimo zokusebenza engajwayelekile.
Into wukuthi "Peshkariki" uphakamisa ukusebenza ikakhulukazi ngokusebenzisa isicelo mobile. Ingqikithi yalo msebenzi ukufaka lolu hlelo efonini yakho bese uhlole website esemthethweni courier. Okulandelayo kuyodingeka uthathele oda ukulethwa asuka kukhasi futhi ukhokhelwe. Ngaphambi kwalokhu, uzodinga akhokhe idiphozi ruble mayelana 60-oda ngalinye. Ukuze balahle yalesi ngesilinganiso, kuphakanyiswa ukuba iphumelele ekuqinisekiseni ezengeziwe. Ngemva ukuqaliswa kwe-oda singakhipha imali isayithi noma ukuthola inkokhelo. Ukubalwa nsuku zonke.
Konke lokhu kubonakala osolisayo. Ngakolunye uhlangothi - umqashi unikeza ukuhamba kanye ngokuphelele umsebenzi schedule. Ngakolunye, kwenza sonke isikhathi esengeziwe ukucabanga, futhi angikopeli uma ehambisa. Yingakho "Peshkariki" abasebenzi wathola Izibuyekezo okuxubile. Kunzima ukuba yahlulele ubuqotho corporation.
"Peshkariki.ru" zuza omuhle Izibuyekezo amakhuriya lokho le sevisi kuyasiza ngempela ukuba uthole imali. Abaningi aveze ukuthi umqashi yindlela lenhle kakhulu yekutsi itoho. It unikeza izimo ezikahle lomsebenzi. Vele okudingayo!
Kungenzeka ukusebenza courier ngesicelo - yilokhu ejabulisa abasebenzi. Azikho nezikweletu abalulekile. Ngemva nezithunywa ngokwabo ukuthatha oda ezithile futhi afeze ukulethwa yabo. Ezinye iphupho ukusebenza amakhono efanayo.
"Peshkariki" libuyekeza umsebenzi yezithunywa kungukuthi okungcono wathola yokuntuleka umsebenzi ohlelekile. Njengomthetho, le nhlangano owunikelayo itoho. Amashibhi abasebenzi abasebenza ngokugcwele. Bajabule nje umsebenzi: Ukulwa nazo kungenye inkontileka ngokuhambisana nomthetho waseRussia.
Akukho ukuqeqeshwa, izingxoxo, futhi. Njengoba kuye kwashiwo, ukuze uqalise, ufuna nje ubhalisele isayithi inkonzo bese ufake kudivayisi isicelo ephathekayo on the "Pesharikov". Lena inqubo umsebenzi.
Delivery Service "Peshkariki" Izibuyekezo omuhle ezifana abasebenzi bathole mahhala umsebenzi schedule. Wagcizelela kaningi. Abasebenzi amahhala ukunquma lapho ngisho onjani wezimpahla ilethwa ku ekhelini elithile. Okungukuthi, abangabantwana inkululeko ephelele isinyathelo. Azikho abaphathi, okuyinto njalo ukusebenza umthwalo, akukho plan nsuku zonke, okumele kwenziwe.
Indlela enhle ngoba itoho! Mahhala schedule - yilokhu uyaphupha cishe njalo inceku. Futhi "Peshkariki" ukunikela nje ngesakhiwo ezifana wokubambisana. Umsebenzi ilungele labo abakwaziyo ukusebenzisa isikhathi sazo.
Futhi njalo kukhona umsebenzi noma umqashi? Yebo. Futhi yingakho ukubuyekezwa komsebenzi "Peshkarikah" ashiye omuhle. Hhayi ngaso sonke isikhathi, kodwa ngokuvamile. Abasebenzi bathi nganoma yisiphi isikhathi ukuze uzithola ingxenye nesikhathi esihle. ukulethwa Express ezithandela abantu.
Caveat kuphela, kufanele sinake: ngezimpelasonto, ngokusho kwabanye imicabango yabantu nezithunywa, oda zimbalwa kakhulu. Ngakho-ke, ukwenza kulezi zinsuku akuyona kulula njengoba kubonakala. Kodwa lena akuyona inkinga enkulu kangaka. Imisebenzi "Peshkarikah" kukhona cishe ngaso sonke isikhathi. Ama-oda avele njalo.
"Peshkariki" abasebenzi libuyekeza ikakhulukazi kuhle kanjani ithemba lokuthola umvuzo. Abasebenzi bathi nje ngalesi umqashi, ungakwazi kalula uthola iholo ehloniphekile. Futhi umsebenzi unomphela imali eningi, futhi itoho.
Noma kunjalo, abanye abangaphansi zisekhona unganelisekile kuwumphumela ukubambisana nenhlangano. Kuyaphawuleka ukuthi izindleko kwamakhasimende akufani ngaso sonke isikhathi. Futhi ngakho-ke kunzima ukusho ukuthi bangakhi bazokwazi ukuthola courier lwenyanga enikeziwe. Kukho konke, akukho izikhalazo abalulekile lapho. Abanye abasebenzi bathi Ngifuna ukukhokha kancane xaxa. Mhlawumbe lena yiyona ndlela isikhalazo kuphela umqashi maqondana nomholo.
On ukuhoxiswa kwezimali
"Peshkariki.ru" libuyekeza amakhuriya uhlobo kuyadida uthola zokuqaleka. abasebenzi abaningi bathi ukuhoxiswa imali uhlelo luhamba kancane. Opharetha ushiye okuningi okufanele oyifunayo. Kodwa ngokuvamile, imali empeleni ukuboniswa. Lokhu kusho ukuthi umqashi enza namathuba okunikezwayo itoho. Ayikho ukukopela!
Ngaphezu kwalokho, ukubuyekezwa komsebenzi "Peshkarikah" ibonisa ukuthi i-High Commission sokuhoxiswa izimali kusukela ohlelweni. Ingabe kufanele ukhokhe 10% weholo lazo imali. IKhomishana kuphezulu, kodwa "Peshkariki" linikeza amathemba kuhle Amaholo. Ngaphandle ukukhohlisa noma ezinye izici ezingezinhle.
Impendulo evela abasebenzi "Peshkariki.ru" ikakhulukazi ekhuthazayo. Yize le khomishana eliphezulu kakhulu ukuhoxiswa lemali elitholwe kusukela uhlelo, izithunywa abonisa ukuthi le sevisi ikuvumela ukwenza imali ngaphandle ukusebenza. Kuyaphawuleka ukuthi oda benzelwe, futhi ikhomishana ingaphansi mncintiswano.
nokubambisana Inenzuzo! Ngaso sonke isikhathi yiba ukuqala ehambisa umsebenzi. Othile uthi inkonzo lokuqala isetshenziselwa itoho, bese iba umthombo njalo imali.
Kodwa akulula njalo njengoba kubonakala. "Peshkariki" - iyisevisi, ngezinye izikhathi akhononde abasebenzi. Akuvamile, kodwa kwenzeka. Kuyini Basho ongaphansi? Yini bekhalaza mayelana avame?
On the ukudideka kanye amakheli oxhumana umamukeli / umthumeli. Nge umsebenzi inkonzo, futhi izinhlangano ezingokomthetho kanye nabantu. Ngakho-ke, ngezinye izikhathi abantu bangase bangawakholelwa abonisa ngokunembile oxhumana nabo sezokuxhumana noma ukulethwa ikheli nzima ukuqaqa. Akukhona ezibucayi, kodwa imininingwane ehilelekile kugcizelela abasebenzi. Ukuze courier kubalulekile ukwazi ukuthi ukuletha izimpahla uma ehlukene. Kungenjalo, ukuze kungaba nje hhayi ukuthatha lokukhokha kwenzeka kuphela ngemva ukulethwa ekhelini elicacisiwe.
Indlela eya iphuzu ekupheleni
"Peshkariki" Izibuyekezo amakhuriya uthola ahlukahlukene. Ukunganeliseki Kuyaphawuleka ukuthi yonke indlela kumamukeli kuyodingeka bakhokhe ngokwakho. Umqashi awubhekene zokuthutha izindleko. Lokhu kufanele ukukhunjulwa wonke umsebenzi ezingaba khona.
Abaningi aveze ukuthi kwezinye izimo, zokuthutha izindleko ziphezulu. Bona kakhulu ukunciphisa Amaholo. Ngakho, akuyona siyazuzisa ngaso sonke isikhathi ukusebenza "Peshkarikah".
Ukuntuleka kokukhulumisana izinzuzo kusukela courier - lokhu kungokwemvelo. Kodwa-ke kudingeka yazi ngezinguquko isisebenzi ngasinye ngaphambi umsebenzi. Kungenjalo kuzisho abangaphansi umqashi. Ukuntuleka kokukhulumisana izinzuzo isinxephezelo izindleko zokuhamba ngokuvamile kugcizelelwe njengoba ukuntuleka inkampani. Akulona ezibucayi, kodwa usenayo indawo. Delivery "Peshkariki" libuyekeza abasebenzi ezahlukene uthola! Ukuze imali ezinhle ngempela kungcono ukukhetha oda ukuthi kulula ukuletha umamukeli. Nakuba ukuchitha endleleni kuyoba esincane.
Isevisi yokuhambisa "Peshkariki" libuyekeza ikakhulukazi okuhle uthola. Lokhu kuyinto engenzeka ngempela umholo abantu abafuna ukusebenza ngezithunywa. Isheduli Mahhala, izimo ezikahle ngokubambisana, futhi akukho ukucindezeleka - yilokhu ejabulisa izicelo. Wonke umuntu ithuba baqale ukusebenza nomholo efanayo. Uma wayefisa, ungahlala nomqashi njalo.
Ezinye izimangalo "Peshkariki" usenayo. Kodwa akuzona njengebalulekile futhi kubalulekile ukuze senqabele nokubambisana. Naphezu kweqiniso lokuthi umsebenzi senzeka ikakhulukazi ngokusebenzisa isicelo, le nkampani akuyona zokukhwabanisa. Leli qiniso ejabulisa abantu. Phela, njengoba kuye kwashiwo, abanye nje bayesaba ukubambisana "Peshkarikami" ngenxa ukukhwabanisa inkampani okusolwayo.
Kuyaphawuleka ukuthi ngaphambili, lapho abokuqala befika isevisi, kwakukhona abanye eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa. Kodwa manje "Peshkariki" libuyekeza sezithunywa zeposi ezigibela umsebenzi uthola omuhle - uhlelo ezisebenza at 100% futhi uvumele abantu ukuba benze imali yangempela. Nakuba ngaphandle umsebenzi wenkontileka esisemthethweni. "Peshkariki" - isevisi ukuze izakhamuzi eMoscow Petersburg, esiza ukwenza imali yangempela for nokuhlinzekwa amasevisi okuthumela!
Taxi "ingelosi": ukubuyekezwa. "Ingelosi" (itekisi, eMoscow)
Imboni yobisi eRussia. Imboni yobisi: ukuthuthukiswa kanye nezinkinga. Dairy nenyama umkhakha